Sida loo sameeyo An HTML5 Muqaal
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Muqaal HTML5 ah
HTML5, sida jiilka web caadiga ah ee soo socda, waa geeska. Ma rabtaa inaad ku darto taageerada HTML5 in aad website? Waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii ugu yaraan si ay u diyaariyaan. Maqaalkani waxa uu ku tusi doonaa 2 siyaabood oo wax slideshow HTML5 iyo la socosho in aad website.
Is-socda HTML5 Muqaal
Mid ka mid ah hagaajinta ugu weyn ee HTML5 waa in aad si toos ah Cudarada karo iyo ciyaaro videos online adigoo isticmaalaya. Habkan, kooxda martida ah ka daawan kartaa slideshow HTML5 inta ay browser taageertaa HTML5. Flash player No loo baahan yahay. Tan iyo HTML5 ah u iman waayay ay version final, video codec badan tahay isticmaali kartaa WebM, H264, Ogv ama labadaba.
Waa sidan sidii aad Cudarada kartaa HTML5 slideshow video:
<Video waraaqaha = "movie.jpg" gacanta ku hayso>
<il SRC = nooca 'movie.webm' = 'video / webm; codecs = "vp8.0, vorbis" "/>
<il SRC = '' nooca = 'movie.ogv video / ogg; codecs = "theora, vorbis" "/>
<il SRC = '' nooca = 'movie.mp4 video / mp4, codecs = "avc1.4D401E, mp4a.40.2" "/>
Haddii aad ka arki kartaa video hoose, daalacashada internetka aad taageeraan HTML5, sidoo kale. Maalmahan, daalacashada ugu taageeri slideshow HTML5 horeba. Eeg faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan internetka HTML5.
Sorry, biraawsarkaaga ma taageeri slideshow HTML5, ama u baahan yahay qalab-saddexaad.
HTML5 slideshow video abuuray DVD Slideshow Builder Deluxe - In ka badan 100-guurka ee ka mid ahaa.
Hadda waxa aad u baahan tahay oo kaliya ah software slideshow HTML5 iyo abuuro video slideshow in MP4 (AVC) format.
Interactive HTML5 Muqaal
Sida hadda la isticmaalo Flash slideshow internetka, waxa kale oo aad ku qorshayso karaa slideshow HTML5 ah iyada oo aan wax loo soo dajiyo. Dabcan, uma baahnid inaad si loo qoro naftaada codec. Halkan waxaan ku qaadan la wadaago si weyn loo slideshow HTML5 online tusaale ahaan in ay ku tusaan sida loo Cudarada slideshow HTML5 ah.
1. files meel sax ah.
Marka aad faylka mashruuca HTML5 halkan ka soo bixi, siibka file ah si aad u computer, oo guurto ama geliyaan si ay u folder aad website.
Sidoo kale waxaa jira dad kale si ay u wadaagaan mashruuc ay slideshow HTML5 online. Google hal iyo isbeddel si loo waafajiyo baahidaada. Waxa fiican in ay ku riday ogaysiis copyright inaan u mahadceliyo shaqo qof kale leeyahay, ama raac statements liisanka.
2. Change code si loo waafajiyo baahidaada
Sida caadiga ah, uma baahnid in la beddelo xeerka CSS iyo JS files, marka laga reebo cinwaanka link haddii aad ku riday gal ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, waa in aad bedesho cinwaanka link file CSS si 'qabnay / script.js' haddii aad u guurtay script.js soo gudbin galka ah ee hadda jira loo yaqaan 'qabnay'. Noocan ah cinwaanka link waxaa lagu magacaabaa link qaraabo, halka nooc kale waa link buuxda, sida http://yoursite.com/scripts/script.js. Haddii slideshow HTML5 la Cudarada bog ku gal ah, waa in aad isticmaasho wax la mid ah '../scripts/script.js'. Waxaad si fiican u isticmaali lahaa link buuxda haddii aadan aqoon u leh kala duwanaanshaha.
Qaybta ugu muhiimsan ee this slideshow HTML5 sida calaamad oo sanduuqa cas. Copy-duubnaan galay page kasta oo aad rabto in aad slideshow HTML5 in uu soo bandhigo iyo in la beddelo cinwaanka image sida kor lagu sharaxay.
Riix si aad u weyneyso.
3. Kulanka Xiisaha leh daalacashada HTML5
Ugu dambayn, arko sida slideshow HTML5 u eg yahay in aad HTML5 browser. Sida caadiga ah, waxaad heli doontaa tan slideshow HTML5. Bogga, waxa kale oo aad kala soo bixi yaabaa HTML5 files slideshow iyo arko habka faahfaahsan si ay u qorshayso by Martin Angelov.
Sidoo kale iska hubi soo baxay arrimo slideshow Flash si ay u soo duubey website ku qasabno.
4 Siyaabaha u hagaagsan SMS la Bartilmaameedyada kala duwan
Sida loo Archive Messages Facebook?
Sida loo dhoofin, badbaadin iyo ka daabacan Messages Facebook on Facebook.com
Fikradaha Wedding Farriin - bishaaree Your Guurka ee Sidaada
Sida loo soo dejinta su'aalo ka Excel